Koh-Lanta: uyu mubvunzo "anotyisa" uyo ave mudiwa wevashandisi veIndaneti - Pano - TELES RELAY
HOME » mwe »Koh-Lanta: uyu mubvunzo" anotyisa "uyo ave mudiwa wevanoshandisa Internet - Pano
Koh-Lanta: uyu munhu "anotyisa" uyo ave mudiwa wevashandisi veIndaneti - Pano
Usiku huno muKoh-Lanta, Angélique yakabviswa. Anonyadziswa naCindy mukukomba, Maxime ari kurwisa Bordeaux. Asi pamusoro pezvose, mumwe munhu anenge asvika pachibvumirano akabuda mumeso evashandisi veIndaneti, avo vanofunga kuti vakawana ramangwana rinouya.
Uye dai aiva iye mhare yemunguva yemberi Koh-Lanta, hondo yevakuru ? Chero mamiriro ose ezvinhu, iye atotora mwoyo yevatariri vekuratidzwa. Pakutanga kwemutambo, hatingave takapa ganda rinodhura. Red Team YakabviswaCyril yakanga ine nharo shoma shoma yekuita kupfuura yeimba yegore ino. VictorBeatriceEmilie... runyora rwevamwe vaizogona kukunda raiva nguva refu pakutanga kwechiitiko. Asi kubviswa kwezvinhu zvose zvinodiwa uye kuwirirana kunobatsira shamwari yakatendeka yaMaud. Shamwari sezvoseCyril aiziva kuti aifanira kudiwa sei nevatambi vemamwe marudzi maviri.
>>> Koh-Lanta: Iko kunogadzirwa kupi apo vatsva vanogara nenzira yakaoma?
Nokuti akafanana naCyril. Muzuva, mumvura, masikati kana pakati peusiku, iye anogara achinyemwerera pachiso chake. Uye zvinonakidza zvakawanda. Kana akazova imwe yezvigaro zvemarudzi akabatanidzwa, muumbi wemakore 37 zvakare aifarira zvikuru mumasangano evanhu. Kutaura kwake kwakanaka pashure pokunge apedza usiku mumvura kuti atsigire Aurelian, tenzi wemoto, akafarira zvakawanda pa Twitter. Inonzi surfer inokunda inotanga muenzaniso: "Akakura Cyril! " Kune mumwe iye kunyange "Mukunda we Koh Lanta »hapana kunze kweizvozvo.
Anonyadziswa naCindy, Maxime anoramba asingatsvaki
Archery, zvaiva (zvakare) zvakasarudzwa : "Ndakadzidzisa vana mumusasa wezhizha". Maxime aiva nechokwadi chekuvadzura neuta hwake nemiseve. Asi in Koh Lantahapana chiri kuita sezvakarongwa. Mutungamiriri weboka revakunda, uyo aimbova musoro webhuruu aifunga Ita chirwere chimwechete chaCindy. Mukurumbira mukuru uyu mwaka yakasimba mune sarudzo pane kupfugama : "Handizi Petro Pan ... o, kwete mumwe ... Handisi Robin Hood". Asi pakusanzwisisana, zvinogona kuitika uye ndizvo zvakaitika chaizvo manheru ano.
Akarwisana naCindy, Maxime akashaya pfuti rake uye haana kunzwisisa apo kukwanisa kwake kupfurikidza nehota kwakange kwaenda. Kana iye akarasikirwa nemutambo wekunyaradza kune boka rake, iye akanyanya kukuvadza hupenyu hwake. Aine mhosva yekukundikana kwake, Cindy akamutora nzvimbo : "Akadya chikafu, akapfura museve pangozi, haasi iye anofarira". Uye ramba uchidaro, "Uye museve, ini ndichanzwa nezvazvo munguva yekufambisa nguva! " Zvinoshamisa kuti paakavhara muromo wake, hatina kunzwazve nezvemiseve yeArchery. Uyu mutongi anozviti ano Koh Lanta akakurumidza kuva jongwe zvakare panguva yekuzvidzivirira, vakabata maoko pasi mushure mekurara kwakanaka kweusiku (apo shamwari dzake dzaidzivirira moto pamusoro pemvura) ...
Kana zvisina kudaro, Koh-Lanta, yakanga iriwo:
- Flying ascents. Unyanzvi hwaMaximime hunobva "Ndakadzidzisa archery pamazororo kuvana"à "Maxime mucheri wemhondi". Mumaviri mashoma, ndiye mhare yenyika mukupfura, murume.
- Kutenda kwakaipa. Sezvo kutsanangurwa kwaMaximime kukunda: "Ndiwo museve wakaipa woupenyu hwangu. " Aaaaaaaah ok ...
- Funny situations. "Tisati taisa vanhu, taivabika uye taidya". Musoro waMaud: "Oo hongu? Zvakanaka kuve kunonoka, comincio akanzwa fatica, enda kune zvakawanda mubhasi ".
- Kuzvininipisa pane Maximime. "Ndine simba, ndakanyatsoita! " Izvo zvinonyadzisa kuedza kwaitwa mapofu, tingadai takazvisarudza kuti zviitwe mukunyarara.
- Akadzokorora mapikicha. "Maxime muongorori, akandiita kuti ndife muchando. " Haisi chakanakisisa guy version ye Dora iyo Explorer.
- Kubwinya (bis): Angelica aiva nechisarudzo chekuenda akawana hutachiona hwemuviri wake, asi akasarudza kuenda kumusoro kune Steeve - kwaaida kubvunza chivharo chekuchengetedzwa kwezvirwere. Asi sezvazvisina kutora, akabviswa.
Kuzvininipisa kwezuva, naMaximime
"Kugadzirira kwemunhu wese Koh-Lanta, ini ndihwo hupenyu hwangu hwose hwakandigadzirira. " Titiregererei kuti tive vatsigiri, huh.
Pfungwa yakanaka yezuva racho, neAriélien
The spider yakabikwa "Zvakanyanya kunaka"saka inobatsira zvakanaka kana iwe uine mamwe merguez mazaya.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.voici.fr/tele/koh-lanta-ce-candidat-genial-qui-est-devenu-le-chouchou-des-internautes-659984
Switzerland: "Tinonzwisisa zviri nani nei zviiti zvezvakaipa zvinouya kuSwitzerland"